यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी जान्नैपर्ने १६ कुराहरु ! जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ – Makalukhabar.com
यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी जान्नैपर्ने १६ कुराहरु ! जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ
एजेन्सी । यौन सबैको चासोको विषय हो । त्यसैले यौनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा सबैको रुची हुन्छ ।
तर यति धेरै रुचीको विषय हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यौन स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न मानविय गुण तथा व्यवहार र यथार्थ तथ्यको बारेमा धेरै जानकारी हुँदैन । दुनियाँमा जन्म, मृत्यु जस्तै यौन पनि साश्वत सत्य हो ।
सृष्टि चक्र सञ्चालनका लागि यो अनिवार्य सर्त हो । यौन स्वास्थ्यको विषय मानिसले उमेर पुगेसँगै आफै जान्ने तथा सिक्ने विषय पनि हो । यौन स्वास्थ्यका बारेमा केही यथार्थ तथ्यहरु यस्ता छन् ।
१ सम्भोगले मानिसले पीडा सहनसक्ने क्षमता बढाउँछ । सम्भोगको चरम सुखका बेला शरीरमा उत्सर्जन हुने हर्मोनले पीडा कम गर्दछ र पीडा सहने सीमा पनि बढाइदिन्छ ।
८ अक्जिटोसिन हर्मोनले सम्भोगका बेला महिलालाई मात्र प्रभावित गर्ने मान्यता यसअघि थियो । तर, पछिल्लो अध्ययनले के देखाएको छ भने यो हर्मोनले महिला र पुरुष दुवैमा यौनिक सक्रियता बढाउँछ र पुरुषमा सम्भोगका बेला आत्मविश्वास वृद्धि गर्छ ।
९ टेस्टेस्टेरोन पुरुषको सेक्स हर्मोन हो । तर, यदि पुरुषको शरीरमा उच्च मात्रामा यो हर्मोनको उत्पादन भयो भने त्यसको असर नकारात्मक हुन्छ । शरीरमा उच्च टेस्टेस्टेरोन उत्पादन भएमा पुरुषमा सेक्सको इच्छा कम हुन्छ, उसले विवाहबाट आफ्नो अपमान भएको सम्झिन्छ जसका कारण उसको वैवाहिक र यौन जिवन बिथोलिन्छ ।
१२ साहिँली औँलाको लम्बाइले पुरुषको लिंगको लम्बाइको बारेमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१३ पारिवारिक अवस्थाले पुरुषको सेक्स हर्मोन टेस्टेस्टेरोनलाई प्रभावित गर्छ ।
१४ खानपानले मानिसको सेक्सको क्षमतामा सबैभन्दा धेरै असर पार्छ ।
१५ विश्वमा सबैभन्दा बढी गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरुले गर्ने गर्छन् । किनकी यो उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी असुरक्षित यौन सम्पर्क हुने गर्छ ।
१६ श्रीमतीले आफ्नो यौन समस्या तुरुन्तै श्रीमानलाई भन्ने गर्छन् भने श्रीमान्ले आफुमा रहेको यौन समस्या लुकाएर राख्ने गर्छन् ।